Utu Pi Compute Module 4: usoro mgbakọ ọhụụ | Akụrụngwa n'efu
Ntu Pi Ntọala nwere ihe eji egwuri egwu ọhụrụ, ọ bụ ụdị ọhụụ nke CM ma ọ bụ Compute Module. Ngwunye usoro maka ịgbakwunye akwara ugbu a. Nke ahụ bụ, ọ gbasara Modul Mgbakọ Rapsberry Pi 4, site na usoro nke akwukwo ohuru na emegharia ohuru banyere akụrụngwa.
una ọhụrụ SBC osisi Belata ezubere iche maka ngwa mmepụta ihe ebe a chọrọ ụdị modulu a. Knowmatakwu banyere njirimara ọrụ ya niile, ị nwere ike ịga n'ihu na-agụ ...
Compute Module 4 Njirimara
La Utu Pi 4 malitere na June 2019, ma ugbua abia nsụgharị maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ama ama CM. Otu modul nke na-eji otutu ihe eji eme ihe Pi 4 mbu, dika ya quad-core processor ARM Cortex-A72 na 1.5Ghz. Mgbawa dị ike nke ga-esonyere nha dị iche iche nke RAM na eMMC flash nchekwa.
N'etiti ohere ebe nchekwa ebulu ị nwere site na 1GB nke LPDDR4-3200 ruo ikike nke ihe ruru 8GB, na-aga site na mbipute 2 na 4GB.
Banyere ebe nchekwa ya dị nchekwa nchekwa ụdị eMMCAlso nwekwara ọtụtụ nsụgharị ịhọrọ site na, nke ahụ ga-agbanwe ọnụahịa ikpeazụ, nke bụ ihe dịka $ 25 na-amalite. N'okwu a ị nwere ụdị Lite, yana 0 GB, ma ọ bụ nsụgharị nwere ebe nchekwa dị ka 8GB, 16GB, na 32GB.
Nwekwara ike ịhọrọ Raspberry Pi Compute Module 4 na na enweghị njikọta WiFi. N'ihe banyere bọọdụ SBC nwere ụdị netwọkụ a, ọ ga - abụ modul WiFi 802.11ac, nke ahụ bụ ịsị, protocol ama ama 5. Na nke ahụ, anyị ga-agbakwunye Bluetooth 5.0, nke ga-adịkwa.
Gụnyere interface PCIe 2.0 na 28-pin GPIO, inwe ike «kpọọ» ya na ọrụ gị ...
Na nkenke, dabere na njikọta, ụdị ebe nchekwa dị mkpa na ikike nke ọkụ, ị gaghị enwe ihe ọ bụla 32 dị iche iche na ị nwere ike ịzụta site ugbu a gaa n'ihu gọọmentị webụsaịtị. Thedị ntọala ga-efu $ 25, ebe mbipute ahụ na WiFi, 8GB nke RAM na 32GB flash ga-efu ihe dị ka $ 90.
N'ezie, na mgbakwunye na Module Compute a, Raspberry Pi ekwuputala ọkwa ọhụrụ ya IO Board maka $ 35. Nke ahụ bụ, motherboard nke enwere ike ịgbakwunye Compute Module 4, na mgbakwunye ịnwe ọdụ ụgbọ mmiri 2x HDMI, Gigabit Ethernt (RJ-45), 2x USB, oghere microSD, oghere PCIe, yana 40 GPIO mkpọ, njikọ igwefoto na ihuenyo, tinyekwara njikọ njikọ 12v.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Utu Pi Compute Module 4: Ntugharị Mgbakọ Ọhụrụ